Waxaan ahayn saaxiibo oo galmo ayaa jirtay ... sidee wax u socdaan | Ragga Stylish
Waxaan ahayn saaxiibo oo galmo ayaa jirtay… sidee u socotaa?
Waxaan horey uga wada hadalnay xiriirka saaxiibtinimada ninka iyo naagta. Laga soo bilaabo Ragga Stylish Waxaan dhahnay taas ma aaminsani, madaama marar badan - hadaan had iyo jeer ahayn - xiriirku wuu wareersan yahay waanan lumin karnaa saaxiibtinimadaas.
Saaxiibbo badan oo ka soo horjeedda jinsiga ayaa sameeya wax la mid ah kuwa jecel: waxay aadaan filimaanta, wada casheeyaan, daawadaan filimada fadhiga sariirta, iwm, iwm. Hadda, maxaa dhacaya markii aad galmo la yeelatay saaxiibkaa? Taasi way fiicnaan kartaa, gaar ahaan haddii aad ku qanacsan tahay ama haddaad iyada dareen hore u lahayd.
Waxay noqon kartaa laad aad u fiican in la bilaabo xiriir, laakiin dhowr jeer, galmo lala yeesho saaxiib waxay kicin kartaa nooc kale oo dareen ah, tan ugu caamana waa qoomamo. Tani waxay dhici kartaa sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad saaxiibtinimo la yeelato iyada ama inaad dooneysid inaad dhab ka ahaato iyada. Marka, su’aasha ugu weyni waxay halkan ka soo baxaysaa ... maxaa la samaynayaa si ay wax waliba u sii ahaadaan sidii hore oo aan innaga midkeenna wareerin?
Ka hadalka galmada ... Ma ka walwalsan tahay xajmiga guskaaga? Hagaag hada waxaad si fudud u kordhin kartaa cabirkiisa degsashada buuga sayidka guska
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad la hadasho, qirato wixii si cad u dhacay, laakiin adigoon muujin wax dareen diidmo ah. Sidan oo kale, ma dareemayso in la isticmaalay, laakiin iyada oo aan dan badan laga siin waxa dhacay, ma rumaysan doonto inay wax ka sii badan yihiin. Kadib, iskuday inaad sameysid dhar nadiif ah, ugu yeer sidii horeyba u yeertay laakiin kaliya adigoo matalaya saaxiib.
Furaha ugu muhiimsan ee lagu hubiyo inaad wali saaxiibo tihiin galmada kadib ma wada seexan doontaan mar kale. Waa hal shay in "qalad la sameeyo" hal mar, laakiin waa mid kale in la sameeyo laba jeer ama ka badan. Halkaas ayay wax badan ku wareeri doonaan oo waad lumin kartaa.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee maskaxda lagu hayo waa inaad joojiso inaad u maleyso iyada oo qaawan ama aad xasuusato daqiiqad aad wada joogteen. Waa inaad u dhaqanto oo aad u fikirto sidii aadan waligaa arkin iyada oo qaawan, sida caadiga ah ee ugu macquulsan. Xeelad kale ayaa ah inaad sii wadato sameynta isla saaxiibadaadii caadiga ahaa ee aad galmada kahor sameyn jirtay. Haddii aad wada ciyaari doontaan, sii wad. Haddii ay ku kulmaan hal maalin usbuucii si ay u qaxweeyaan, waan sii waday. Iyo tan ugu muhiimsan, ha sameyn wax kasta oo si khaldan loo turjumi karo.
Mid ka mid ah dabeecadaha caadiga ah ee ragga ayaa ah in loo toogto dhinaca ka soo horjeedka xaaladda aan raaxo lahayn. Ha saarin sawirka. Mawduuca habeenka galmadu wuxuu ku imaan doonaa dhowr wada sheekeysi, laakiin taasi micnaheedu maahan inaad waayaysid. Waa inaad ku hadashaa oo aad u sheegtaa inaad kaliya u jeceshahay iyada oo ah saaxiib wanaagsan oo aanad rabin inaad lumiso. Daacad noqo oo u sheeg sida aad dareemeyso iyo sida aad dareemeyso.
Hadda, maadaama dumarku aad u dhib badan yihiin, wax kasta oo aan kor kuugu soo sheegay ma dhici karaan. Haddii dhowr toddobaad ama bilooyin ay ka soo wareegtay dhacdadaas oo ay kula macaamilayso sidii inaad tahay saaxiibkaa, markaa iyadu ma fahmin inaadan doonayn wax jacayl kula jira. Marka, xaaladdan waxaad ku qasbanaan doontaa inaad ogaato in saaxiibtinimadu ay dhammaan doonto oo macquul tahay xaalado xun. Una diyaargarooba wax kastoo ay kugu samaynayso ... naagaha dulliga ah ayaa laga cabsan karaa!
Miyaad galmo la yeelatay saaxiib? Sideed udhaqantay haddii ay doonayaan inay ilaashadaan saaxiibtinimadaas?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Waxaan ahayn saaxiibo oo galmo ayaa jirtay… sidee u socotaa?
Maqaalku wuxuu umuuqdaa mid haweeney qortay !!! Maxaa dhacaya markaa markaan rabno inaan sii wadno galmo isla markaana isla markaa xiriir saaxiibtinimo? Waxay iila muuqdaan inay soo jeedinayaan in la xakameeyo rabitaanka caadiga ah ee ninku u yeelan karo saaxiibkiis.
Jawaab oswaldo suarez
Mar dambe ma ihi dijo
Ma jeclaan lahayd in gabadhaada ama walaashaa sidan loola dhaqmo? Si fiican u fikir!
Ku jawaab Yonomas
Waad salaaman tihiin asxaabta, waxaan idiin sheegayaa in dhawr toddobaad ka hor iyo ilaa iyo bishii Ogos aan lahaa wax la mid ah saaxiib sannado aan xidhiidh la lahaa iyada
Ka sokow, waxaan sidoo kale u baxnay lammaane laakiin wax walba way wareersanaayeen wixii ka soo horjeedana waxa halkan ka soo baxa waan ku xiraa iyada iminkana waxaan ahay qalad la'aanteed, laakiin aakhirka waa laga qaadi doonaa, waxaan ku talin lahaa haddii Marnaba galmo ma sameynin ama hadaad hal jeer oo keli ah tan iyo markaas wax walba isku buuqsan yihiin aakhirkana labadeenaba dhib ayaan la kulannaa maxaa yeelay saaxiibo uma nihin sidii hore oo kale iyo sababo jira awgood ama mid kale oo ka dambeeya galmada ayaan sidoo kale bilaabay inaan jeclaado iyada, ma fiicna wax isku qas oo saaxiib gaar ah ka yeelo raaxada.
Hagaag, waxaan lahaa saaxiib, iyadu way i jeceshahay laakiin ma aanan rabin Jada inay la socoto, tallaabo wanaagsan. Waxaan ku dhammeynay inaan sameyno hal galab. Hadana way dhacday marar kale oo dheeri ah wax walbana waan dhameeyay. Inaan noqdo gabadheeyda murugsan hada waan is ugaarsanaa oo waxaan ku noolahay farxad Muxammad
Ku jawaab rony
Waxaan la seexday saaxiib, laakiin waxay leedahay saaxiib (inkasta oo ay ii sheegtay in sariirta aysan ku qancinayn, waxaan siiyay habeen jacayl laga bilaabo 00:8 illaa 14:XNUMX subaxnimo / kulul saaxiibkay, laakiin ka dib waxaan sariirta aadnay oo nooca XNUMX:XNUMX Gurigeyga / maalinta xigta waxaan dareemay wanaag aad u wanaagsan / hal mar ayaan wajahay iyada waxaanan u sheegay inaan la doonayo wax culus oo iyada ah oo ay diido markasta, way iga diideysaa, laakiin waxay leedahay dhinac baraf ah oo agteeda ah ma fahmin oo xitaa waxay rabtaa inay saaxiibkey noqoto, laakiin sidee saaxiibtinimo naadir ah oo aan u leeyahay inaan ka hadalno galmada mararka qaar, maxaa ka sii badan, waxaan kula jiraa qolkeeda oo iyadu badh-qaawan laakiin iyadu marwalba biriga ayey dhigtaa, way ila talinayaan, maxaa yeelay runtu waxay tahay waxaan ku noolahay cadaab shaqsi.)
Ku jawaab C.
Hagaag, maqaalkani wuu fiicnaa, xaas ayaan qabay xiliyada masiibada dhacday laakiin wey fiicneyd, anigoo raacaya tilmaamahan, horey ayaan u shukaansanay wiilna waxaan ku nahay wadada
Jawaab Adrian Torrez
Tilmaamo si aad sifiican ugula ekaato gabadhaada
Jack Daniel wuxuu soo bandhigayaa cabitaanadiisa qasacadaysan